लाहानमा पहिलो पटक जनमत पार्टीको प्रदर्शन, यस्ता लगाए नारा « Light Nepal
Published On : 19 March, 2019 7:25 pm
सिरहा, ५ चैत्र । राष्ट्रिय परिषद बैठक पछि डा. सीके राउत नेतृत्वको नवगठित जनमत पार्टीले आज मंगलबार सिरहाको लहानमा प्रदर्शन गरेको छ । दुई दिन अघि भएको सिके नेतृत्वको गठबन्धनले राष्ट्रिय परिषद बैठक पछि पार्टीको नाम परिवर्तन गरि जनमत पार्टी नेपाल राखेको छ । सरकारसँग भएको ११ बुँदे सम्झौतालाई ऐतिहासिक सफलता मान्दै डा. राउतलाई नागरिक अभिनन्दन गर्ने कार्यक्रम तय भएपनि प्रर्दशन मात्र गरिएको हो । मोटरसाइकल र्याली प्रदर्शन गर्दै डा राउतका कार्यकर्ताहरुले ‘सिके राउत जिन्दावाद, जनमत पार्टी जिन्दावाद’ सहितका नारा लगाएका थिए ।
प्रदर्शनका क्रममा डा. राउतले लहानस्थित मधेस आन्दोलनका शहिद रमेश महतोलगायतको शालिकमा माल्यार्पण गरेका छन् । अलग मधेसको मुद्दा छाडेपछि राउतका समर्थक घटेको र प्रदर्शन पनि फितलो भएको देखिएको छ । दुई दिन अघि भएको राष्ट्रिय परिषद बैठकमा राउतले सहभागीलाई नागरिकता अनिवार्य गरेका थिए भने पञ्चकन्याले राष्ट्रिय गान गरेका थिए । लहानस्थित मारवाडी सेवा सदनमा राउतलाई उनका समर्थकले माला लगाइदिए। र्यालीसहित नगर परिक्रमा गरियो। मोटरसाइलक र्यालीमा करिब दुई सयजति समर्थक सहभागी भए।
समर्थक भन्दा राउतलाई हेर्न र उनको भाषण सुन्न आउनेको संख्या बढी देखियो। त्यसपछि मधेस आन्दोलनका प्रथम सहिद रमेश महतोको शालिकमा राउतले माल्यार्पण गरे। माल्यार्पणपछि राउतले सम्बोधन भने गरेनन्। उनी बोल्दै नबोली सप्तरीतिर लागे।
०७३ साल माघ ५ गते मधेस बलिदानी दिवसका दिन राउत लहान आउँदा हजारौँको संख्यामा उनका समर्थक उपस्थित थिए। प्रहरी प्रशासनलाई भिड थेग्न समस्या परेको थियो। ०७४ माघ ५ गते जनकपुरमा पनि उतिकै संख्या समर्थक देखिएका थिए। गएको माघ ५ गते राउत जेलमै हुँदा पनि राउतका समर्थकले लहानमा मोटरसाइकल र्याली गरेका थिए। राउत नेतृत्वको जनमत पार्टीका केन्दीय सदस्य अब्दुल खान अब संगठन विस्तारमा लाग्ने बताउछन्। ‘अब हामी जनतामा जान्छौँ, चुनावमा भाग लिन्छौँ,’ उनले भने,‘जनताले हामीलाई जे को लागि मत दिन्छ त्यही अनुसार अगाडी बढ्छौँ।’